ELDORADO နှင့်ပက်သက်သော အမေးများသော မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများ
ELDORADO နှင့်ပက်သက်သော F.A.Q
မာဗရီုဒီညီအစ်ကို ဆာဂျီးနှင့်ဗီရာချယ်စလပ်ဗ် အလ်ဂိုရစ်သမ် ။ တခြားလူများကိုကူညီနေစဉ်အတွင်း အမြတ်တစ်သမတ်တည်းရရှိစေသော ထူးခြားသည့်သင်္ချာဖော်မြူလာဖြစ်ပါတယ်။ https://my.eld.club/mail.htmll. တွင် အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီး ထိုအလ်ဂိုရစ်သမ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ကာ အပြန်အလှန်ကူညီရေးစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင် MMM ချစ်သူများမှ အဖွဲ့။ MMM ကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီ လူသိများစေခဲ့သော အဖွဲ့ဝင်များ။ ပရိုဂရမ်မာများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ၊ ဆောင်းပါးဆရာအစရှိသဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်။
စနစ် ELDORADO ကလပ်။ လည်ပတ်မှုအားလုံးဟာ စကားလုံးတစ်ခုတည်းတွင်ပါဝင်ပါတယ်။
ပေးကမ်းမှု။ MMM တွင်အကူအညီပေးမှုနှင့်တူသော “ပေးကမ်းခြင်း”။
ပေးကမ်းရန်လိပ်စာ။ မန်ဘာတစ်ယောက်အတွက် ပေးကမ်းရမယ့် သီးသန့်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိပ်စာကိုလွှဲသမျှငွေအားလုံးကို ဒီမန်ဘာကပေးကမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလားတူစွာ ဆုကြေးငွေများကိုလဲ ဒီပေးကမ်းမှုလိပ်စာပိုင်ရှင်ကိုပဲပေးပါမယ်။
ခေါင်းဆောင်။ အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး မန်ဘာအသစ်များကိုတက်ကြွစွာ ဖိတ်ကြားပြီး သူတို့ပေးကမ်းရန်ကူညီသူကိုခေါ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်အရ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်တွင် referrals များစွာရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအကြီးကြီးရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာမခံ ငွေပြန်အမ်းမှု။ စနစ်ပြန်မည်စတင်လျှင် သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အတွင်းရှိ (ပေးကမ်းမှုပမာဏ၊ ဝင်ငွေ၊ ဘောနပ်) အပေါ် 80% ကိုအလိုအလျောက်ပြန်အမ်းငွေပြန်ရပါမည်။
မှတ်သားရန်စကားစု။ လျို့ဝှက်အပ်သောစကားစုဖြစ်ပြီး cryptocurrency လိပ်စာကိုဝင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
“Cold”ပိုက်ဆံအိတ်။ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်နှင့်မချိတ်ဆက်ထားသဖြင့် ဟက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ELD ဟာ ELDORADO တွင် ပေးကမ်းမှုများကိုမှတ်သားရန် အသုံးပြုသော ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ELD စျေးနှုန်းဟာ 8မိနစ်တိုင်းတွင် +0.00485917%ဖြင့် တိုးပါတယ်။ (တစ်ရက်ကို1% ၊ တစ်လကို30% )သင်ဟာ ELD ကို cryptocurrency အဖြစ် အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
1. ELDORADO ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်သူဖန်တီးထားတာလဲ?
ဒါဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ကူညီရေးကလပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ MMM မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ELDORADO စနစ်ဟာ ဆာဂျီးနှင့်ဗီရာချယ်စလပ်ဗ် မာဗရိုဒီညီအစ်ကိုဖန်တီးထားသော ထူးခြားသော သင်္ချာအယ်လ်ဂိုရစ်သမ် ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ပိုင် ပေးကမ်းခြင်းပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သူ့ကို ယခင် MMM ချစ်မြတ်နိုးသည့်အဖွဲ့မှ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ELDORADO အဖွဲ့မှ ဒီ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ကာ သီးသန့်အပြန်အလှန်ကူညီရေးစနစ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
မာဗရိုဒီညီအစ်ကိုရဲ့ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဝပ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရရှားဘာသာစကား၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် တို့နှင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ https://my.eld.club/mail.html
ဇွန်လ ၄ရက်နေ့တွင် ဆာဂျီးမာဗရိုဒီရဲ့ ညီ ဗီရာချယ်လ်စဗတ်ကသူ့ twitter နှင့် Facebook pages တို့တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ၅ရက်နေ့တွင် ဆာဂျီးမာဗရိုဒီနှင့် နီးကပ်စွာအတူတကွတွဲလုပ်ခဲ့ကြသော ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဇွန်လ၇ရက်နေ့တွင် အဆိုပါအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ ထပ်မံပြီးပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဇွန်လတွင် ELDORADO ပရောဂျက်ဟာ အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ပေါ်အခြေခံပြီး cryptocurrencies များကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပရောဂျက်ကို ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၂၄တွင် လူသိများပြီးဖြစ်သော cryptocurrency bitcoin နှင့် စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံများနှင့် ELDORADO စနစ် ဗားရှင်း ၃ ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဖြစ်ကာ SPARTA cryptocurrency ရဲ့ blockchain ပေါ်တွင်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ bitcoin ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ကာ ပိုမိုအသုံးဝင်ပါတယ်။
စနစ်ဟာ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းပါတယ်။ စာရွက်စာတန်းများအရ ဒါဟာ လုံး၀အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး ဟက်လို့မရကြောင်းသက်သေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
2. ELDORADO စနစ်ကိုဘာလို့ဖန်တီးခဲ့တာလဲ?
ELDORADO ကိုယခင် ဆာဂျီးမာဗရိုဒီကို ချစ်ခင်သူ MMM ချစ်သူများအဖွဲ့မှ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပရောဂျက်ကိုစတင်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်က ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန် ခြေလှမ်းသစ်စတင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းခြင်း၊ သင်္ချာနှင့် blockchain နည်းပညာကြောင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးကလပ်ဟာ ကမ္ဘာသစ်တည်ဆောက်ရန်ငွေကြေးစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါမည်။
3. ဘယ်သူက စနစ်ကိုထိန်းချုပ်မှာလဲ?
ဘယ်သူကမျှမထိန်းချုပ်ပါ။ ELDORADO ဟာ လုံး၀ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းတဲ့စနစ်ပါ။ ဒါဟာ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး၊ cryptocurrency နှင့် blockchainပေါ်အခြေခံကာ လူ့ပယောဂလုံး၀မပါဝင်ပါ။
စနစ်ထိန်းသိမ်းရေးကို ယခင် MMM ချစ်သူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ELDORADO အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာဘာကွာခြားသလဲ? အလွယ်ဆုံးပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝပ်ဆိုဒ်ကိုပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ဟာ private keys များနှင့် မန်ဘာငွေကြေးများကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။
ကျွန်တေ်ာတို့ဟာ cold ပိုက်ဆံအိတ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုကာ၊ ဆာဗာများက ငွေထုတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်တွင်မချိတ်ဆက်ထားပါ။ ထို့ပြင် ကျွန်တော်တို့က လုံး၀ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းသော ဘဏ်စနစ်ကို ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
4. ဘာလို့ အခြားဝပ်ဆိုဒ်များနည်းတူ logins များ passwords များမသုံးတာလဲ?
ဒါဟာ မည်သူကမျှ passwords ကိုမခိုးနိုင်သဖြင့် အသုံးပြုသူများကိုတိုက်ခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ထို့ပြင် GDPR ( General Data Protection Regulation) - https://gdpr-info.eu//) အရ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တေ်ာတို့က မက်ဆေ့နည်းဖြင့် ပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ရှင်အတည်ပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
5. မန်ဘာဖြစ်လျှင် အန္တရာယ် ကင်းရဲ့လား? စနစ်ကို ဟက်လို့ရလား၊ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုခိုးလို့ရလား?
အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ စနစ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ချိန်းပေါ်အခြေခံထားပြီး ဟက်လို့မရပါ။ ငွေပေးချေမှုအားလုံးဟာ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး သင်္ချာအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ပေါ်အခြေခံထားကာ လူ့ပယောဂလုံး၀ကင်းပါတယ်။
စနစ်တွင် “cold” ပိုက်ဆံအိတ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဆာဗာဟာ အင်တာနက်မှလှမ်းယူလို့မရသော ငွေပေးချေမှုကိုအသုံးချထားသဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ထို့ပြင် ELDORADO တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပါဝင်သဖြင့် ခိုးယူစရာအကောင့် password လဲမရှိပါ။
6. ယခင် MMM ပရောဂျက်နည်းတူ ELDORADO ကိုလဲပိတ်သိမ်းနိုင်ပါသလား?
မဖြစ်နိုင်ပါ။ MMM ဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစာရာတွင် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ MMM-94 ကိုအစိုးရမှပိတ်သိမ်းကာ MMM မန်ဘာများပိုင်ဆိုင်သော ထရပ်ကား၁၇စီးတိုက်ငွေများကိုသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ MMM-2011 ဟာ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆာဂျီးမာဗရိုဒီ အဖမ်းခံရခြင်းကြောင့်ပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရပြိး MMM Global ဟာ သူ့ကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ MMM_94, MMM-2011 နှင့် MMM Global တို့မှ သင်ခန်းစာများရရှိခဲ့ကာ ဟာကွက်များကိုပြုပြင်ထားပါတယ်။
သီးသန့် blockchain နည်းပညာ၊ မာဗရိုဒီညီအစ်ကို သင်္ချာအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာကိုအသုံးပြုထားကာ စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။
ELDORADO တွင် ငွေများကိုခိုးယူလို့မရနိုင်ပါ။
ဒါဟာ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းသော စနစ်ဖြစ်ပြီး မည်သူ့ပေါ်မှ မမှီခိုပါ၊ သူ့အလိုအလျောက်လည်ပတ်ပြီး အမိန့်ပေးစရာမလိုပါ။
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ELDORADO ဟာ MMM လိုအဆုံးသတ်မသွားနိုင်ပါ။
7. ELDORADO တွင် မန်ဘာအချက်အလက်များကိုဘယ်မှာသိမ်းသလဲ? အချက်အလက်များဘယ်ကလာသလဲ?
ကျွန်တော်တို့မည်သည့်အချက်အလက်မှ မသိမ်းပါ။ ELDORADO ဟာ ဘလော့ချိန်းပေါ်အခြေခံပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အချက်အလက်များနှင့် အကောင့်အချက်အလက်များဟာ blockchain မှဆင်းသက်လာပါတယ်။ blockchain explorer https://www.blockchain.com/ ဟာ ဘလော့များမှ ဒေတာများမျှဝေနိုင်သကဲ့သို့ ELDORADO တွင် လည်းအချက်အလက်များဟာ အလားတူဝေမျှနိုင်ပါတယ်။
စနစ်ဟာ လုံး၀ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ်။ ELDORADO ဟာ အသုံးပြုသူများရဲ့ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမှ မသိုလှောင်ထားပါ။ လုံး၀ပါ။ အရာရာဟာ blockchain ထဲမှာပဲ သိုလှောင်ပါတယ်၊ ဒါပါပဲ။
8. ELDORADO မန်ဘာဘယ်လိုဖြစ်လို့ရမလဲ?
၁။ ကျွန်တော်တို့ ဝပ်ဆိုဒ်ပင်မစာမျက်နှာ https://my.eld.club သို့မဟုတ် ရုံးခန်း https://my.eld.club/lk.html ကိုသွားပါ။
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်(PA) ဖန်တီးရန် သင့် cryptocurrecny လိပ်စာကိုထည့်ကာ "ပူးပေါင်းရန်" ကိုနှိပ်ပါ။ အရေးကြီးသည်! သင့်ကို မှတ်သားရမည့်စကားစုမထည့်ခိုင်းပါ - သင့်ဆုများပေးနိုင်ရန် လိပ်စာသာလိုအပ်ပါသည် လိပ်စာထည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ပိုက်ဆံအိတ် မည်သည့် အန္တရာယ်မှမရှိနိုင်ပါ။ သင့်လိပ်စာဟာ သင့် PA အတွင်းဝင်ရန်ဖြစ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားပါ။
၃။ ပေးကမ်းမှုပြုလုပ်ရန် သင့် PA တွင်ဖော်ပြထားသော Donation လိပ်စာသို့ cryptocurrency များလွှဲပြောင်းပေးပါ။ နောက်ထပ်ပေးကမ်းခြင်းများကိုလဲ ထိုလိပ်စာကိုသာသုံးပါ။ ဒီလိပ်စာကို ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ဆုများကို သင်ဖော်ပြထားသော ပိုက်ဆံအိတ်သို့ပေးပါမည်။
၄။ သင့် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွင် သင့် referral link ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ သင်ဟ သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ကာ အဆင့်-၈ဆင့် ခေါင်းဆောင်ဘောနပ်အထိရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုအသုံးချကာ စနစ်အတွင်း သင်ဖိတ်ခေါ်လိုသူများကို ပေးပို့ပါ။
၅။ သင့် PA တွင် အသုံးဝင်အချက်အလက်များလဲပါဝင်ပါတယ်။
သင့်ခေါင်းဆောင်၊ သင့်ကိုစနစ်အတွင်း ဖိတ်ခေါ်လာသူ
“Donation” - သင့်ငွေလွှဲမှုများအားလုံးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
“Bonus” - သင့်ဘောနပ်မျာကိုပြသထားပါတယ်။
“Payouts” သင့်လိပ်စာသို့ပို့ထားသော ငွေပေးချေမှုများဖော်ပြထားပါတယ်။
“Referrals” သင့်အဆင့်-၁ referrals များကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
“Stats” တွင် စာရင်းအင်းများတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွင် ထုတ်ယူလို့ရသောပမာဏ (သင့်ပေးကမ်းမှု၊ ဝင်ငွေ၊ ဘောနပ်) များကိုလက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်ပြသထားပါတယ်။ နောက်စျေးတန်းတစ်ခုကို 8 တိုင်းတွင်ပြောင်းလဲပါတယ်။
9. ELDORADO တွင် မည်သည့်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီး ပေးကမ်းမှုပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ပေးကမ်းနိုင်သောပမာဏအပေါ် ကန့်သက်မှုများရှိပါသလား?
SPARTA cryptocurrency ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သင်ဟာ မည်သည့်ပမာဏမဆို ELDORADO ကိုပေးကမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကန့်သက်ချက်မရှိပါ။
ရပါတယ်၊ သင်ပေးကမ်းချင်သလောက်ကို မည်သည့်အချိန်မဆို ပေးကမ်းနိုင်ပါတယ်။
11. ယခင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အမြတ်၊ငွေပေးချေမှုမရမီ နောက်ထပ်ပေးကမ်းမှုအသစ်လုပ်လို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ ယခင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ ပေးကမ်းမှုအသစ်ကိုအချိန်မရွေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
12. အမြတ်ကဘယ်လောက်လဲ၊ ဘယ်အချိန်ရရှိမလဲ?
သင့်ပေးကမ်းမှုများဟာ 8မိနစ်တိုင်းတွင် +0.00485917% တိုးပါတယ်။
ဒါဟာ တစ်ရက်လျှင်1% ။ သို့မဟုတ် တစ်လလျှင်30%
သင်ဟာ အချိန်မရွေးငွေထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရန် သင်ဟာ အောက်ပါလမ်းညွှန်မှုအတိုင်း မက်ဆေ့ပို့နိုင်ပါတယ်။
13. ငွေထုတ်သည့်အခါ ငွေများဟာ ဘယ်ကိုရောက်မလဲ?
သင့်ခံစားခွင့်မျာကို သင် ”JOIN” ဖောင်ဖြည့်စဉ်က ဖော်ပြခဲ့သော cryptocurrency လိပ်စာကိုပို့ပေးပါမယ်။ သင် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အတွင်းဝင်ရောက်သည့်လိပ်စာပါပဲ။
14. သင့်မှာ referral ပရိုဂရမ်ရှိပါသလား? ရှိရင် စည်းကမ်းချက်တွေကဘာလဲ? “ငွေအသစ်”ဆိုတာဘာလဲ?
ရပါတယ်။ သင်မန်ဘာအသစ်ကိုခေါ်ဆောင်လာလျှင်၊ ဒီမန်ဘာဒီမန်ဘာပေးကမ်းမှုအပေါ် +5% ကို referral bonus အနေဖြင့်ရပါမယ်။
သင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သောမန်ဘာဟာ ပေးကမ်းမှု $1000 ကိုပြုလုပ်လျှင် သင်ဟာ ချက်ချင်း +5% ကိုဘောနပ်အဖြစ်ရပါမယ်။
သို့သော် ဘောနပ်ဟာ “ငွေအသစ်” အတွက်သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ငွေအသစ်ဆိုသည်မှာ ပေးကမ်းမှုအသစ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုခေါ်ဆိုပြီး ပေးကမ်းမှုမှရရှိသော အကျိုးအမြတ်မဟုတ်ပါ။
သင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သောမန်ဘာဟာ $1,000 ပေးကမ်းသည်ဆိုလျှင် - သင်ဟာ $50 ရရှိပါမယ်။
သို့သော် ဒီမန်ဘာကပဲ $1,500 ထုတ်ယူပြီး ပေးကမ်းမှု $1,000 ပြုလုပ်သည့်အခါ၊ သင်ဘာဘောနပ်မှမရှိပါ။
သင်ဟာ အနည်းဆုံး $88 ကိုပေးကမ်းပြီးလျှင် referral ဘောနပ်များဟာ စတင်ရရှိပါမယ်။
15. ကျွန်တော့ referral link ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ၊ မန်ဘာအသစ်ဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်ရမလဲ?
သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အတွင်း သင့်လိပ်စာအောက်တွင် သင့် referral link ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုလိပ်စာကို သင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောလူကိုပေးလိုက်ပါ။ ထိုလိပ်စာကိုနှိပ်ပြီး စနစ်ကိုပူးပေါင်းသောအသုံးပြုသူတိုင်းဟာ သင့် referral ဖြစ်လာပါတယ်။ သင့် referrals တိုင်းအတွက် သင်ဟာ ဘောနပ်များရရှိပါတယ်။
16. ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့တည်ဆောက်လို့ရလား။ အဆင့်များ-ခေါင်းဆောင်ဘောနပ်က ဘယ်လောက်လဲ
ရပါတယ်! သင့် referral များက မန်ဘာအသစ်များကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်အခါ သင်ဟာလဲ ဘောနပ်များရရှိပါတယ်။
ဥပမာ သင်ဟာ မောင်မောင်ကို စနစ်အတွင်း ဖိတ်ခေါ်လာလျှင် သူဟာ သင့် referral ဖြစ်လာပါတယ်။ မောင်မောင်ဟာ ကျော်ကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်လာလျှင် သူဟာ အဆင့်-၂ referral ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျော်ကျော် ဟာ အောင်အောင်ကိုဖိတ်ခေါ်လာသည့်အခါ သူဟာ အဆင့်-၃ referral ဖြစ်လာပါတယ်။
စနစ်အတွင်း အဆင့်-၈ဆင့်ထိခွင့်ပြုပါတယ်! အခြေအနေ၂ခုအကြုံးဝင်လျှင်ဘောနပ်များရရှိပါတယ်။
သင်ဟာ သက်မှတ်ထားသောပမာဏကိုပေးကမ်းပြီးလျှင်၊ အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ။
ဘောနပ် ရာခိုင်နှုန်း အခြေအနေ
အဆင့် ၁ 5% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $88 မှစပြီး
အဆင့်23% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $888 မှစပြီး
အဆင့်31% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $1,888 မှစပြီး
အဆင့်40.5% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $2,888 မှစပြီး
အဆင့်50.3% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $3,888 မှစပြီး
အဆင့်60.1% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $4,888 မှစပြီး
အဆင့်70.05% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $5,888 မှစပြီး
အဆင့် 8 0.05% ကိုယ်ပိုင်ပေးကမ်းမှု $6,888 မှစပြီး
စုစုပေါင်း ဘောနပ် 10%
17. ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်(PA) ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ?
သင့် cryptocurrency ကိုရွေးပါ။
သင့် cryptocurrency လိပ်စာကိုထည့်ပါ “Join” ကိုနှိပ်ပါ။
18. ငွေလွှဲပြောင်းမှုလက်ခံရရှိရန် အတည်ပြုချက် ဘယ်နှခုလိုအပ်သလဲ?
SPARTA network တွင် အတည်ပြုချက် 3ခုလိုအပ်ပါတယ်။
19. တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းသွားရင်ရော? စနစ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်မလား? ငွေပြန်အမ်းတာအာမခံမှုရှိသလား?
တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းသွားပြီး စနစ်ဟာ ပြန်လည်စတင်ခြင်းကိုကြေငြာလျှင် မန်ဘာတိုင်းဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အတွင်းရှိ (ပေးကမ်းမှုပမာဏ၊ ဝင်ငွေ၊ ဘောနပ်) များရဲ့ 80% ကို ပြန်အမ်းငွေအဖြစ် ရရှိပါမယ်။
20. ကျွန်တော်ဟာ အမြတ်များကိုသာထုတ်ပြီး ပေးကမ်းမှုများကို စနစ်အတွင်းထားခဲ့လို့ရသလား။
"Withdraw" ကိုသွားပါ၊ လိုအပ်သောပမာဏကိုထုတ်ယူပါ။ ကျန်ရှိသောပမာဏဟာ အတိုးနှုန်းအတိုင်းတိုးပါမယ်။
21. ငွေထုတ်ရန် မက်ဆေ့ကိုဘယ်လိုအတည်ပြုရမလဲ? ဘာလို့လိုအပ်တာလဲ?
သင်ဟာ လိပ်စာကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မက်ဆေ့ကို အတည်ပြုရပါမယ်။ ဒါဟာ လွယ်ကူပြီး သင့်cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်တွင် ကလစ်အနည်းငယ်သာနှိပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ဟာ သင့် စနစ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ဟက်ခံရခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။ passwords များကိုမည်သည့်နေရာတွင်မှ မသိုလှောင်ထားသဖြင့် ခိုးယူလို့မရနိုင်ပါ။ ထို့ပြင် သင့် cryptocurrency လိပ်စာဟာ သင့် password ပါပဲ။
SIGEN.pro ဝပ်ဆိုဒ်တွင် SPARTA ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်း အလွယ်တကူအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
22. SPARTA ပိုက်ဆံအိတ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ ၊ မက်ဆေ့ ဘယ်လိုအတည်ပြုမလဲ?
https://wallet.sparta.top/ SPARTA ဝပ်ဆိုဒ်ကိုသွားပါ။
မှတ်မိရန်စကားစု ခက်ခဲမှု(အရှည်)ကိုရွေးပါ။ (ဥပမာ 128-bit ကုတ်) “Generate” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Bits များတာရွေးလေ စကားစုကပိုရှည်လေဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်တီးထားသော စကားစုကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်သိမ်းထားပါ။ မှတ်သားထားပါ ချရေးထားပါ။
သင့်စကားစုကိုသိမ်းထားပြီးကြောင်းအတည်ပြုသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင့် ပိုက်ဆံအိတ် ထံရောက်သွားပါမည်။
ထိုစကားစုမှာ သင့်login နှင့် password ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဝင်ရန် သုံးပါ။
https://wallet.sparta.top/ တွင် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲဝင်ပါ။ “Sign/check the message” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်အတည်ပြုလိုသော မက်ဆေ့ကိုရွေးပါ။ သင့် ELDORADO အကောင့်တွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
“Sign” ကိုနှိပ်ပါ။ စနစ်အတွင်းဖန်တီးလိုက်သော မက်ဆေ့ကိုကူးပါ။ ELDORADO တွင်ငွေထုတ်သည့်အခါသုံးပါ။
23. SIGEN.pro တွင်ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းမလဲ၊ မက်ဆေ့ဘယ်လိုအတည်ပြုမလဲ။
SIGEN.pro ဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဝပ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြိး PC နှင့် mobile device တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်မည်သည့်အရာမှ ဒေါင်းလုတ်လုပ်စရာမလိုပါ။ သင့်တွင် login နှင့် password ရရှိကာ၊ two-factor authentication နှင့် အကူအညီရရှိပါမည်။ ထိုပလက်ဖောင်းကို ဘာသာစကား ၁၁မျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့် email နှင့် password ထည့်ပါ။ လုံခြုံရေးအတွက် password မှာ အနည်းဆုံး စာလုံးရေ ၈ လုံးရှိသင့်ပြီး စာလုံးကြီး စာလုံးသေး၊ ဂဏန်းနှင့် အထူးစကားလုံးများပါရပါမည်။
အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်ကိုဖတ်ပါ၊ “I agree” ကိုရွေးပါ “Next” ကိုနှိပ်ပါ။
အတည်ပြုကုတ်ကိုသင့် email သို့ပို့်ပါမည်။ သင့် email ကိုစစ်ပါ၊ ကုတ်ကိုကူးပါ၊ ဝပ်ဆိုဒ်တွင်ထည့်ပါ။
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ “Refill your balance” ပုံရှိရာ ပိုက်ဆံအိတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။
SPARTA cryptocurrency ဘေးရှိ “Deposit/withdraw” ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုလိပ်စာကိုအသုံးပြုကာ စနစ်အတွင်း ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ငွေလက်ခံရန်အသုံးပြုပါ (ဒါကို ELDORADO ရှိသင့်အကောင့်တွင်းဝင်ရန်အသုံးပြုပါ) နောက်တွင်သုံးနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။
လိပ်စာဘေးရှိ ဘောပင် ပုံကိုနှိပ်ပါ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်! သင်ဟာ အောင်မြင်စွာအတည်ပြုပြီးပါပြီ၊ ငွေထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိ “Stats” ခလုတ်တွင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
25. ပေးကမ်းရန် cryptocurrency ကိုဘယ်မှာရနိုင်မလဲ?
cryptocurrency ရောင်း၊ဝယ် ရန်
SPARTA website ရှိ အိတ်ချိန်းဂျာတွင် အခြား cryptocurrency များအသုံးပြုကာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ https://sparta.top/
SIGEN.pro အိတ်ချိန်းတွင် အခြား cryptocurrency ဖြင့် အိတ်ချိန်းလုပ်နိုင်ပါသည်။
SIGEN.pro အိတ်ချိန်းတွင် P2P ပလက်ဖောင်းဖြင့် အခြား ငွေကြေးများဖြင့် အိတ်ချိန်းလုပ်နိုင်ပါသည်။
26. SPARTA ကွန်ယက်တွင် အတည်ပြုရန် အချိန်မည်မျှစောင့်ရမည်နည်း?
ပျမ်းမျှအားဖြင့် အတည်ပြုချက်၁ခုရရန် ၁မိနစ်ကြာပါတယ်။
27. အခြားမေးခွန်းများရှိပါက ဘယ်မှာဆက်သွယ်လို့ရမလဲ?
ဝပ်ဆိုဒ်ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော ချက်တင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတ။်
ကျွန်တေ်ာတို့ Telegram ချယ်နယ်ကိုဝင်ထားကာ ပရောဂျက်သတင်းများကို ချက်ချင်းရယူပါ Telegram ချယ်နယ်
ကျွန်တော်တို့ Telegram ဂရုကိုပူးပေါင်းကာ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ Telegram ဂရု
ကျွန်တော်တို့ skype ချက် ကိုပူးပေါင်းကာ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ skype ချက်
28. ပေးကမ်းခြင်းပြုရန် cryptocurrency လိပ်စာကိုပြောင်းလို့ရပါသလား? ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလို့ရပါသလား?
စနစ်မှာ blockchain နည်းပညာပေါ်တွင် အခြေခံထားသဖြင့် ဘာမျှပြောင်းလဲလို့မရပါ။ အချက်အလက်အသစ်များကိုသာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။
29. စနစ်ဟာ ငွေပေးချေရန် မန်ဘားငွေများကိုဘယ်မှာ သိမ်းဆည်းထားသနည်း?
ပေးကမ်းမှု အားလုံးဟာ သီးသန့်လိပ်စာများတွင် သွားရောက်စုဆောင်းကာ စနစ် ငွေအကောင့်ထဲရောက်ရှိပါတယ်။
သင်ဟာ ပေးကမ်းမှုအားလုံးနှင့် ငွေလက်ကျန်ကိုဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://blockchain.sparta.top/#/address/SPA13M4ezSHAEVG8v6rdH
30. စနစ်ဟာ ဘာလို့ SPARTA cryptocurrency ကိုအသုံးပြုတာလဲ?
ဒါဟာရှင်းပါတယ်။ SPARTA မှာ ပညာပေးဝပ်ဆိုဒ်ရှိခြင်း၊ ငွေလွှဲရန်အတွက် အိတ်ချိန်းဂျာပါရှိခြင်း၊ လိုအပ်သောအချက်အလက်များရှိသော ပိုက်ဆံအိတ်ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသထားသောရိုးရှင်းသော blockchain explorer လဲပါဝင်ပါတယ်။ ပရောဂျက်ကို ဘာသာစကားပေါင်း ၂၀ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အလွန်မြန်ပါတယ်။SPARTA ဘလော့ချိန်းဟာ ငွေလွှဲမှုများကို ချက်ချင်းနီးပါး ဆာင်ရွက်ပေးနိုင်သဖြင့် ငွေဝင်ခြင်းကို ပိုမိုမြန်စေပါတယ်။
ယုံကြည်ရပါတယ်။SPARTA ဘလော့ချိန်းဟာ ကွန်ယက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုစိတ်ပူးခြင်းမှရပ်တန့်စေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ တူညီပါတယ်။SPARTAဟာ ELDORADO လိုပါပဲ၊ ငွေကြေးစနစ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်လို်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုအတူတကွပြောင်းကြပါမယ်!